Amachibidoro ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ọtụtụ ebe ọha na eze na Austria
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Austria na -agbasa ozi ọma » Amachibidoro ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ọtụtụ ebe ọha na eze na Austria
Austria na -agbasa ozi ọma • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ala Austria Alexander Schallenberg
Mmachibido iwu ntinye a ga-amalite n'izu na-abịa, ọ ga-emetụtakwa cafes, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ihe nkiri, ebe a na-egwu ski, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ndị na-edozi isi na ihe omume ọ bụla metụtara ihe karịrị mmadụ 25.
Gọọmentị Austria kwuru na ọ na-atụ anya na ọnụọgụ COVID-19 ọhụrụ ga-eru ọkwa ọhụrụ n'izu ndị na-abịa.
A ga-egbochi ndị niile na-enyeghị ọgwụ mgbochi ịbanye ogologo ndepụta nke ebe ọha, gụnyere ụlọ mmanya, cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
A ga-enwe oge mgbanwe izu anọ, n'oge nke ndị natara ọgwụ mgbochi mbụ ma nwee ike ịnye ule PCR na-adịghị mma ga-ahapụ iwu.
N'ịkọpụta mmụba ngwa ngwa na-atụghị anya ya na ikpe COVID-19 ọhụrụ, Onye isi ala Ọstrịa Alexander Schallenberg kwupụtara na n'oge na-adịghị anya a ga-egbochi ndị niile na-enweghị ọgwụ mgbochi ịbanye n'ọtụtụ ebe ọha, gụnyere ụlọ mmanya, ụlọ nri, ụlọ ihe nkiri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Schallenberg kwuru n'ịkpọsa mmachi ọhụrụ ahụ, "Evolushọn ahụ bụ ihe pụrụ iche na ebe akwa akwa nlekọta ahụike na-abawanye ngwa ngwa karịa ka anyị tụrụ anya ya."
Dabere na Schallenberg, mmachibido iwu ịbanye ga-amalite n'izu na-abịa ma tinye ya na cafes, ụlọ mmanya, ụlọ nri, ụlọ ihe nkiri, ebe a na-eme egwuregwu ski, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ndị na-edozi isi na ihe omume ọ bụla metụtara ihe karịrị mmadụ 25.
Mmachibido ọhụrụ nwere ike imetụta akụkụ buru ibu AustriaOnu ogugu ndi mmadu, ebe ihe dika 36% nke ndi bi na ya enwetabeghị ọgwụ mgbochi zuru oke megide nje COVID-19.
Ọnọdụ ọhụrụ COVID-19 kwa ụbọchị ruru 9,388 ụnyaahụ, na-erute AustriaNdekọ ndekọ nke 9,586 edere n'afọ gara aga, gọọmentị na-ekwu na ọ na-atụ anya na ọnụọgụ ahụ ga-eru ọkwa ọhụrụ n'izu ndị na-abịa.
Ọ bụ ezie na usoro ndị a ga-amalite na Mọnde, Schallenberg kwuru na a ga-enwe oge mgbanwe izu anọ, nke ndị natara ọgwụ mgbochi mbụ ha ma nwee ike ịnye ule PCR na-adịghị mma ga-ahapụ iwu. Ka izu anọ ahụ gachara, agbanyeghị, ọtụtụ oghere ọha ga-emeghe ọnụ ụzọ ha maka naanị ndị gbara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị gbakere na nso nso a site na ọrịa COVID-19.
Mgbochi ọhụrụ, nke iwu enyo etinyere na isi obodo Vienna n'isi izu a, emetụtaghị ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, naanị maka ndị na-azụ ahịa, dịka onye isi ala rụrụ ụka, "Otu bụ ihe ntụrụndụ a na-eme n'afọ ofufo - ọ nweghị onye na-amanye m ịga. sinima ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ - nke ọzọ bụ ebe ọrụ m."
Gọọmentị na-ahụ maka nchekwa akọwapụtala ihe mgbochi siri ike na ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na 600 ma ọ bụ karịa nke akwa nlekọta ahụike Austria juputara na ndị ọrịa COVID-19, na-etinye ha nke ọma na mkpọchi. Dị ka ụbọchị Tọzdee, ọnụ ọgụgụ ahụ guzoro na 352, mana ọ na-arị elu karịa 10 kwa ụbọchị.
Austria dị anya site na mba Europe mbụ iji mejuputa mmachibido iwu ịbanye, ebe France na andtali na-emepụta usoro ịgba ọgwụ mgbochi dijitalụ nke ha iji mee ka usoro ndị ahụ sie ike.
Germany, kwa, ugbu a na-atụgharị otu echiche ahụ. Ka steeti German na-emejuputa mkpọchi mgbochi na ọgwụ mgbochi chọrọ, Chancellor Angela Merkel na-apụ apụ kparịrị maka “mgbochi siri ike” na ndị a na-enyeghị ọgwụ mgbochi n'ofe Germany n'ozuzu n'isi izu a.